Terms uye Conditions | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Welcome to yedu yepaIndaneti. Kana ukaramba browse uye kushandisa website iyi yauri ndabvuma zvinoenderana uye wakasungwa anotevera mashoko uye mamiriro mashandisiro, izvo pamwe chete yedu zvakavanzika inozowana zvibate ukama yedu yepaIndaneti nemi pachinhu website iyi.
Izwi yedu yepaIndaneti kana 'isu’ kana 'isu’ anoreva muridzi Website. Shoko rokuti 'iwe’ inoreva User kana Fafitera website yedu. Kushandiswa website iyi pasi zvinotevera mashoko kushandiswa:
Zviri mapeji website iyi kungopa mashoko ako uye kushandisa chete. Zviri pasi kuchinja pasina chiziviso.
Hakuna isu kana mapato rechitatu zvinopa chero garandi kana vimbiso sezvo kururama, timeliness, mutambo, kukwana kana suitability mashoko uye nezvinhu vakawana kana akabayira website iyi chipi kunyanya chinangwa. Iwe kubvuma kuti mashoko uye zvinhu zvakadai ingasanganisira inaccuracies kana kukanganisa uye isu zvakajeka vanodzinga liability chero inaccuracies zvakadaro kana zvikanganiso zvizere akatenderwa mutemo.
Kushandisa kwaunoita chero mashoko kana zvinhu website iyi zvachose yako hatiripe, nokuti izvo isu haangavi nemhosva. Rinofanira kuva wako basa nechokwadi chokuti chero zvigadzirwa, mabasa kana ruzivo kuwanikwa kuburikidza website iyi zvimwe zvinodiwa zvenyu.
website ino rine zvinhu izvo vaiva pedyo kana marezinesi kwatiri. Izvi zvinhu zvinosanganisira, asi hakungoitwi, magadzirirwo, marongerwo, tsvaka, chitarisiko uye Graphics. Pamuviri hakubvumidzwi kunze maererano Copyright chiziviso, iyo inowanikwa izvi mashoko uye mamiriro.
trademarks All kuburitswa munyika website iyi, izvo vasiri ndera, kana marezinesi kuti opareta, vanonzi vasarudzwa pamusoro Website.
Kunze komutemo kushandisa website iyi kungamutsa kutaura kuti kukuvadzwa / kana kuva mhosva.
Nguva nenguva website iyi Angasanganisira anobatanidza vamwe Websites. Links aya anopiwa zvivanakire yenyu kupa mamwe mashoko. Havana haaratidzi kuti isu tsigira ari Website(S). Hatina basa nokuda zviri chokuita Website(S).
Ungasava kusika link ku website iyi kubva mumwe Website kana gwaro pasina yedu yepaIndaneti asati yakanyorwa mvumo.